Budhacad badeed sannad haysta lamaane Koonfur Afrikaan ah oo lacag badan dalbaday – Radio Daljir
Cape town, Oct 27- Budhcad badeedda Soomaalida ah ee haysta muddo sannad ah lamaane u dhashay dalka Koonfurta Afrika ayaa ehelladooda telefoon kula hadashiiyay xilli ay budhcaddu dalbanayaan madax furasho lacageed oo dhan 4 milyan oo Doollarka Maraykanka.
Bruno Pelizzari oo 52 jir ah, iyo Debbie Calitz oo 49 jir ah, waxay adduun hanti haysteen waxa ay u iibiyeen si ay badaha dunida u soo maxaan, waxana ehelladoodu ay sheegeen in aanay awoodayn bixinta madaxfurashada ay budhcadda Soomaalida ah sheegteen.
Budhcadda oo ogolaaday in wada hadalka telefoonka la duubo oo warbaahinta la siiyo ayaa uu Pelizzari ku sheegey in xorriyadooda loo iibiyo.
Hadalka la haystahan oo u muuqday mid ku wajahan dowladda Koonfurta Afrika haddana dowladdaasi aanay ogollayn bixinta madaxfurasho, taasoo ay siyaasad ka leedahay.
Wadahadalka telefoonka kaddib waxa ay ehellada Pelizzari sheegeen in uu leeyahay xanuunka dhiig karka, imika macdantii jidhkiisa oo yaraatay aawadeed ay timihiisu daadanayaan.
Dowladda koonfurtaAfrika oo ka hadashay dalabaadka muwaadiniinteeda ee dib ugu iibinta xorriyaddooda ayaa sheegtay in ay budhcaddu tabo kala duwan isticmaalaan siday hadafkooda u gaadhi lahaayeen.